I-Biography yePrince Diana
I-Princess Diana wayehlala, ngelishwa, ubomi obufutshane kodwa obunobulumko, waba enye yeempawu zekhulu lama-20 - uyakhunjuzwa kwaye esithandwa ngumbolo enkulu yabantu abangamaNgesi kuphela, kodwa nabemi bezinye iindawo.
Ubuntwana beNkosana Diana
UDian Francis Francis Spencer wazalwa kwindawo yokumkani - kwinqaba yaseSandrigue. Uyise wentombazana nguJohn Spencer, uViscount Eltorp, owayevela kwintsapho yakudala yaseSpencer Churchill. Esi sihloko siyihlo kayise ka-Diana ekhulwini le-17. Umama wekamva lomtshakazi naye wayengummeli wentsapho ehloniphekileyo neyasendulo - wayeyintombi yindodakazi ekulindeni kukaMongameli uMama.
Kwintsapho yabafundi abane abantwana abangabafundi, babehlala bephantsi koxanduva lwabakhonzi kunye nabahambahambayo. Ngokukhawuleza xa uDiana eneminyaka emithandathu ubudala, uyise nonina bahlukana. Ukutshatyalaliswa kwesehlukaniso kwakude kwaye kunzima, ngenxa yoko, abantwana bahlala kunye nentloko yentsapho, kwaye unina waya eLondon, apho esandula kutshata khona.
UGertrude Allen wayebandakanyekile kwimfundo yekhaya le ntombazana. Emva kokufikelela esikolweni esikolweni, wangena esikolweni saseSylfeld, wabuya e-Ridlesworth Hall kunye nesikolo seentombi ze-elite eWest Hill. UDiana wabonisa ulwazi oluqhelekileyo, kodwa wayehlala ejikelezwe ngabahlobo ababemncoma ngenxa yokuziphatha kwakhe okulula kunye nokulula.
Umyeni kaPrincess Diana
Ngokokuqala ngqa, uDiana kunye neNkosana uCharles badibana kunye ne-Spencer yohlobo lwezindlu - kwinqaba yase-Eatorthor House. Kodwa uthando lwabo aluzange luqale ngalo mzuzu. Ngowe-1977, u-Lady Dee oneminyaka eyi-16 wacinga kuphela ngokufunda kwindlu yebhodi eSwitzerland, kodwa malunga naye, malunga nentombazana. INkosana uCharles wayenomdla kwintombazana entle; wafika kuphela ukuzingela nokuphumla kule ndawo.
Kwakhona, indoda nomfazi esizayo babone eSwitzerland. UDiana wayefuduka apho, wayehlala kwindawo yokuhlala, enikezwa nguyise ukuya kwixesha elininzi, wasebenza kwi-kindergarten. Indlalifa yesitulo ke sele sele i-32 ubudala ubudala, ubunzima bakhe bendixhalabileyo, kwaye ngoku, xa befunda ngokubonakala kwintando ebusweni bonyana bayo, bafuna ukutshata ngomtshato. Ngokuphathelele ukuba uCharles unobungane obude kunye nomfazi otshatileyo uCamil Parker-Bowles wayengayazi nje ivila kuphela - yile nto eyayikhathazekile ngoElizabethe noPrince Philip, kodwa u-Diana oncomekayo wayezolile ngoku, enethemba lokuba iqabane liza kulungisa. Ngandlela-thile, abathandekayo kuphela abavumile ukugqithiswa kukaDiana kumfazi kaCharles, uCamille "wanikela kakuhle" kulo mtshato.
Ubomi bomntu oMntombikazi uDiyana wabhidla ngokukhawuleza emva komtshato. Lo mfazi wayemthanda ngokwenene umyeni wakhe, kodwa akazange abuyele, wamngcatsha . Induduzo kunye nolonwabo kwaba ngu-Diana oonyana bakaWilliam noHarry.
Ukufa kweNkosana Diana
Ekupheleni kweminyaka engama-80, ubomi bentsapho buwa phantsi. INkosana uCharles yaqhubeka idibana noCamilla kwaye akazange azame ukuyifihla. Indlovukazi yayisecaleni lendodana yakhe, okokuthi, ngokufanelekileyo, ayizange ibenze lula kuDiane. Kodwa ukuthandwa kwincinci phakathi kwabantu kwanda imihla. Ukumthanda kubahlali abaqhelekileyo kwakungenxa yoko-wayenomdla ngokuzithandela, kwaye akazange anikezele kuphela izinto eziphathekayo kodwa nenkxaso yokuziphatha kubantu abaye bafumana kwiimeko ezinzima.
Emva kokuqhawuka okukhulu kumyeni wakhe , oonyana bakaPrince Diana bahlala kunye noyise, kodwa bahlala benelungelo lokukhuliswa kwabo, ngaphezu koko, umfazi wangaphambili wenkosi naye wayenesihloko.
25 ozayo ookumkani baseBrithani
Isiqwenga sekhekhe lomtshato sasePrincess Diana sithengiswa
Izithethe ezingaqhelekanga zokuzalwa kwabantwana basebukhosini
Ngo-1997, uNkosana uDiyana waqala ukudibana noDodi Al Fayed, unyana we-billionaire waseYiputa, nokuba namahemuhemu ekubandakanyeka kwabo kwangaphambili azalwe, kodwa inkohlakalo eyingozi yathintela ukuba inkosikazi ingonwabi. Ngomhla ka-Agasti 31, oonyana baka-Princess Diana kunye neCharles Charles balahlekelwa ngumama wabo-imoto apho uDee Dee wayehamba kunye nomthandi wakhe kwisantya esiphezulu esaxhaswa kwi-support support. Isiphumo esibulalayo sokuba semoto sasingenakupheka.
URobert Pattinson noKristen Stewart babonwa kunye kunye neminyaka emihlanu emva kokuhlukana
UMegan Markle noPrince Harry abayi kungena kwisivumelwano somtshato
U-Anna Wintour uhlekisiwe kwiqoqo le-Kanye West
UCloe Moretz kunye neNeimar
U-Ed Sheeran watshata ngasese
Umfazi "uMnu Bean" unqabile enkundleni ngenjongo yokuqhawula umtshato
USophie Marceau noMonica Bellucci
ULiam Hemsworth akaxhaswanga kuMiley Cyrus
Imini yeveki ka-Melania Trump: Yintoni ebomini yindoda yokuqala edabukisayo yase-USA?
ULindsay Lohan ubeke ingxelo kwividiyo elwa noYegor Tarabasov
Ubomi bukaNatalie Dormer
UJennifer Aniston okhulelwe ephumla eBahamas
Kusemthethweni: uEva Longoria ulindele umntwana
Krismesi enzima: intsapho yaseburhulumenteni yaseBrithani ibhekene nobunzima
Ungayifaka njani ibhasi yeeparele?
25 ezithandwa kakhulu kwi-girly zokudlala ezivela kuma-90s
Visa ukuya eMzantsi Korea
Kandy, eSri Lanka
Iintlobo zeeveves for curtains
Izibonakaliso ezihambelanayo ze-zodiac - indoda uAries-umfazi uAries
Ungaxhoma njani ishedyuli eludongeni?
I-icon yokongeza "Ingqondo" inceda njani?
I-juice celandine - zokupheka, iimpawu zonyango kunye nokuchasene
Ukutya umfazi okhulelweyo kwi-trimester yesibini
Ubonakala ngathi i-candy?
I-Kefir mask yokunyusa iinwele
Iingcebiso kubazali bezikolo zakuqala
Amayeza omntu wesifo somqala - iindlela zokupheka ezifanelekileyo, ukuvavanya ixesha
Izindlu zelizwe elilodwa
Iingxube zokufryisa kwi-oven - recipe
Ukugcoba kwiibhotile - zokupheka ezipheka ekhaya eziphekiweyo
Intsonkotho yamathambo - xabiso